Xukumadda oo dhaqaalaha u kordhinaysa boliska - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ra'iis Stefan Löfven oo axaddii ka jeedinayey qobaddiisa xagaaga Eskilstuna. sawir: Vilhelm Stokstad/TT
Xukumadda oo dhaqaalaha u kordhinaysa boliska
La daabacay måndag 21 augusti 2017 kl 13.44
Raa’iisalwasaaraha Sweden Stefan Löfven oo shalay ka hadlayey magaalada Eskilstuna ayaa sheegay in xukumaddiisa ay dhaqaalaha u kordhinayso ciidamada boliska.
Waxa uu sheegay in boliska loogu kordhinayo dhaqaalaha 2,3 bilyan oo karoon sannadka 2019, iyadoo sanadka 2020 lagu kordhin doono 2,8 bilyan oo karoon,taas oo ka dhigaysa guud ahaan dhaqaalaha loo kordhinayo boliska 7,1 bilyan oo karoon.
Dhaqaalaha loo kordhinayo ciidamada boliska ayaa hadefka laga leeyahay tahay in 10 000 oo ciidan lagu kordhiyo boliska sannadka 2024 iyo sidii loogu soo jiidi lahaa dad badan xirfadda bolisnimada oo ay ugu nagaan lahaayeen xirfadda.
Polisförbundet oo ah iskaashata kulmisa shaqaalaha boliska ayaa soo dhaweeyey baaqa xukumadda ka soo yeeray.
- Waa kordhin dhaqaale oo aad loogu baahnaa, kana micno ah in hadda xukumadda fahantay dhaqaale la’aanta boliska haysatay, waa war lagu farxo aan soo dhaweyneyno, ayey tiri Lena Nitz oo ah guddoomiyaha iskaashatada boliska Polisförbundet.